ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက် - Anebon သတ္တုထုတ်ကုန်များ Co. , Ltd
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ် (ရုပ်ပုံလွှာပြသကဲ့သို့) ကျယ်ပြန့်လုံလောက်ပါတယ်ဒီတော့နိုင်ငံအများအပြားနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။
Service ကိုကတိကဝတ်, အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ထိရောက်မှု, သည်းခံခြင်းနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု, အသုံးပြုသူကျေနပ်နေသည်အထိပါပဲ။
4. Delivery commitmen
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောင်ကြဉ်းထုတ်ကုန်အတွက်တောင်းဆိုပါတီများ၏လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီသတ်မှတ်ထားသောအရပ်မှကယ်နှုတ်ရလိမ့်မည်ဆိုတာသေချာပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအထူးလိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်နှင့်ရှေ့ဆက်အချိန်အမှုတော်ကိုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါက, ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအချိန်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်သင်တို့နှင့်အတူအညှိနှိုင်းရန်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ယူဆောင်ကုန်ပစ္စည်းဖြည်ချပြီးမှန်လျှင်, (အမြင်အာရုံပျက်စီးခြင်းအပါအဝင်) မည်သည့်ပြဿနာမျှအသုံးပြုသူနားလည်နိုငျသောနညျးလမျးတှငျတှေ့ရပါမည်။
5.Transportation Method ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကငွေပေးငွေယူပင်လယ်, လေနှင့်မြေယာအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တင်ပို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ရေကြောင်းနည်းလမ်းများအများအပြားအမျိုးမျိုးအားဖြင့်အာမခံသည်။ ကျနော်တို့တင်ပို့နည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်. သင့်ထံမှအတည်ပြုချက်တစ်ခုရှေ့တော်၌ထိုတင်ပို့စီစဉ်စေမည်။
ကျနော်တို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းလှုပ်ထုတ်ကုန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ wear နဲ့မျက်ရည်ယိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကွဲပြားခြားနားသောထုပ်ပိုးကိုအသုံးပြုပါ။
①EMS: အဆိုပါအမျိုးသားစာတိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Express ကိုမေးလ်, ဆိုက်ရောက်၏တိုင်းပြည်များ၏စာတိုက်တို့ကကယ်နှုတ်တော်မူ၏။
②DHL:, Ltd. DHL အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Express ကို Co. , Deutsche Post ကို Holdings က။
③TNT:, Ltd. Tiandi Express ကို Co. , ဒတ်ခ်ျ Post ကို Holdings က။
④FEDEX: FedEx Co. , Ltd အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရုံးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
⑤UPS: ယူနိုက်တက်ကှကျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Express ကို Co. , Ltd အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရုံးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
လူမီနီယံသတ္တုများပုံသွန်း, အစိတ်အပိုင်းများကို ချ. , အလူမီနီသေဆုံးသွန်း, သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအစိတ်အပိုင်းများ , အစိတ်အပိုင်းများကို ချ. လူမီနီယံသေဆုံး , စိတျအပိုငျး ချ. သေဆုံး zinc,